Jilin hanangana toeram-pialan-tsasatra ski eran-tany kilasin'i Sina
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Jilin hanangana toeram-pialan-tsasatra ski eran-tany kilasin'i Sina
Tanàna Baishan any avaratra atsinanana Shina Jilin faritany miankina amin'ny mampiavaka azy lanezy sy ranomandry loharanon-karena, mikendry ny ho lasa avo lenta manerantany ranomandry toeram-pizahan-tany amin'ny alàlan'ny fananganana toeram-pialan-tsasatra kilasy manerantany.
Eo anelanelan'ny 41 ka hatramin'ny 42 degre avaratra avaratra, fehikibo fizahan-tany volamena fanta-daza, eo afovoan'ny tendrombohitra Changbai malaza, tanàna Baishan dia Shina faritra fizahan-tany feno ala voalohany, miaraka amin'ny tahan'ny fandrakofana ala hatramin'ny 84.1 isan-jato. Noho ny toetrandro mononta any avaratra dia mafana izy io, 90 ka hatramin'ny 120 andro monja ny fe-potoana fanala ary lanezy 400 milimetatra isan-taona eo ho eo. Ny ririnina lava sy ny lanezy be kalitao be dia be dia be dia be izay miteraka toetr'andro amin'ny ski ambony indrindra eto an-tanàna izay mitovy amin'ny an'ny Alpes.
Tendrombohitra Changbai dia trano fandraisam-bahiny misy kintana maro sy toerana fanaovana ski ski matihanina. Amin'izao fotoana izao dia toeram-pialan-tsasatra kilasy eran'izao tontolo izao no mitombo ho vondron'orinasa miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe. ny 23-miliara-yuan Nahazo mpizahatany manao ski ambony iray tapitrisa i Changbai Mountains International Holiday Resort hatramin'ny 2012, miaraka amin'ny olona 6,000 no fandraisana lehibe indrindra isan'andro. Changbaishan Luneng Resort, miaraka amin'ny fampiasam-bola 11.2 miliara yuan, nahazo mpizahatany 30,000 nandritra ny vanim-potoana oram-panala voalohany taorian'ny nanokafana azy Desambra 2016. Tamin'ity taona ity, nanam-bola ny governemantan'i Baishan 60 miliara yuan amin'ny tetik'asa fizahan-tany 44, ny 15 izay mihoatra iray lavitrisa yuan.
Ankoatry ny lanezy sy ranomandry, Baishan koa dia manana lohataona mafanas, rime, fizahan-tany sisintany ary fomban-drazana tokana. Mihoatra lavitra ny fenitry ny fahasalamana manerantany ny kalitaon'ny rano amin'ny loharano mafana. Lushui River National Forest Park, tanànan'ny oram-panala Songling any Linjiang ary Jinjiang ny vatan-kazo hazo dia mitazona ny mpizahatany manerantany miaraka amin'ny kolontsaina isam-paritra sy nentim-paharazana, nahandro, hetsika toa ny fialamboly, fihazana ary fialamboly ririnina hafa.
Miankina amin'ny ranomandry fizahan-tany, fanatanjahantena ary kolontsaina, mikasa ny hampiakatra ny isan'ireo toeram-pisakafoanana ski ho 20 mahery ny governemanta any Baishan, ary hanangana fonosana ranomandry iray miaraka amin'ny 100 hektara amin'ny velaran-tany, foibe fanaovana skating anaty trano, eo ho eo amin'ny 50 skating ivelan'ny ambaratonga samihafa, 12 ranomandry Tanànan'ny fizahan-tany sy tanàna 10 misy fizahan-tany misy fandriana 50,000 XNUMX mahery, ao anatin'ny telo taona. Tanjona ny hisarihana mpizahatany telo tapitrisa isan-taona.
Mampiroborobo fatratra ny fanamboarana fotodrafitrasa fitaterana izay misy làlambe dimy, lalamby roa haingam-pandeha haingam-pandeha ary seranam-piaramanidina telo ihany koa ny tanàna. Ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Changbaishan, nanomboka ny nisokafany ny taona 2008, dia nanisy làlan-drivotra ahitana tanàna 20 mahery Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhouary Shenzhen. Nanomboka ihany koa ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina ao Changbai. Ny roa amin'ireo làlambe telo dia niditra am-perinasa. Ny lamasinina haingam-pandeha haingam-pandeha dia antenaina hiditra amin'ny serivisy amin'ny 2021.